သခင်မကြီး မအ်စူမာ (စ.အ) ၏ရောင်ဇာတော်တွင် မိုးရွာသွန်း ၊ photos
January 29, 2018 - 7:19 PM
အဗ်နာ ။ ။ အီရန် အစ္စလာမ်မစ် သမ္မတ နိုင်ငံတော် ရှိ သာသနာ့မြို့တော် ကွမ်းမြို့ရှိ သခင်မကြီး မအ်စူမာ (စ.အ) ၏ရောင်ဇာတော်တွင် မိုးရွာသွန်းခဲ့သည့် ည မြင်ကွင်းအချို့ ဖြစ်ပါတယ်။
နှင်းများ နှင့် ဖြူဖွေးနေသည့် ရှားအဗ်ဒိုအဇီးမ်ဟစန်နီ ရောင်ဇာတော် ၏ မြင်ကွင်း ၊ photos
အဗ်နာ ။ ။ အီရန် အစ္စလာမ်မစ် သမ္မတ နိုင်ငံတော် ရိုင်ဟ်မြို့ ရှိ ရှားအဗ်ဒိုအဇီးမ်ဟစန်နီ ရောင်ဇာ တော် ဖြစ်ပြီး နှင်းများ နှင့် ဖြူဖွေးနေသည့် မြင်ကွင်း အချို့ ဖြစ်ပါတယ်။
January 23, 2018 - 11:54 PM
(Thinking of building civilizations ) အမည်ဖြင့် ညီလာခံကျင်းပ ၊ဘဂ္ဂဒတ် ၊ photos
အဗ်နာ ။ ။ အီရတ် နိုင်ငံ ဘဂ္ဂဒတ် မြို့တွင် ရဲဟ်ဗရ်၏ ကိုယ်စားလှယ်ရုံးမှ ဦးဆောင်ပြီး (Thinking of building civilizations ) အမည်ဖြင့် ညီလာခံကျင်းပခဲ့ပါတယ် ။ မဂ်ျမယေ ဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ ဘိုက်(သ) (အ.စ) ၏ တာဝန်ခံများနှင့် စွန်နီ ရှီအာ အာလင်မ်များလည်း တက် ရောက် နေရာ ယူခဲ့ပါတယ် ။
မဂ်ျမယေ ဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) ၏ တာဝန်ခံများ နှင့် ရောင်ဇာတော် ကာစမိုင်း ၏ တာဝန်ခံများ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး ၊ photos
January 20, 2018 - 10:02 PM
အဗ်နာ ။ ။ H.I အာဂါယေ မိုဟမ္မဒ် ဟစန် အခ်သရီ ဦးဆောင်သည့် မဂ်ျမယေ ဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) ၏ တာဝန်ခံများ နှင့် H.I အာဂါယေ ကာစမိုင်းနီ ဦးဆောင်သည့် ရောင်ဇာတော် ကာစမိုင်း (အီရတ် ) ၏ တာဝန်ခံများ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး ခဲ့ကြသည့် ပုံရိပ်အချို့ ဖြစ်ပါတယ် ။
မဂ်ျမယေ ဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) ၏ တာဝန်ခံများ နှင့် အီရတ် ဒုသမ္မတ တွေ့ဆုံ ၊ photos
January 20, 2018 - 10:01 PM
အဗ်နာ ။ ။ H.I အာဂါယေ မိုဟမ္မဒ် ဟစန် အခ်သရီ ဦးဆောင်သည့် မဂ်ျမယေ ဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) ၏ တာဝန်ခံများ နှင့် အီရတ် နိုင်ငံ ၏ ဒုသမ္မတ အာဂါယေ နူးရီ အလ်မါလေကီ တို့ တွေ့ဆုံပြီး အရေးကြီး စကားများ ဆိုခဲ့ကြပါတယ် ။
မဂ်ျမယေ ဂျဟာနီ အထွေအေထွ အတွင်းရေးမှူးချုပ် တက်ရောက် သည့်
အာရှ တိုက် ယဉ်ကျေးမှု များ ဆိုင်ရာ ပထမဆုံး ညီလာခံ ကျင်းပ ၊ photos
January 15, 2018 - 6:00 PM
အဗ်နာ ။ ။ အာရှ တိုက် ယဉ်ကျေးမှု များ ဆိုင်ရာ ပထမဆုံး ညီလာခံ ကို အီရန် နိုင်ငံ၏ မြို့တော် တီဟီရန် မြို့တွင် ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့ က ကျင်းပဲခဲ့ပါတယ် ။ မဂ်ျမယေ ဂျဟာနီ အထွေအေထွ အတွင်းရေးမှူးချုပ် H.I အခ်သရီ လည်းတက်ရောက်ခဲ့ပြီး အီရန်နိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီးနှင့် အခြား အရေးကြီး အီရန်အစိုးရဌာနများ မှ အရာရှိကြီးများနှင့် နိုင်ငံခြားဧည့်သည့်တော်များ လည်း တက်ရောက် နေရာ ယူခဲ့ကြောင်း သိရှိခဲ့ရပါတယ် ။
January 15, 2018 - 5:47 PM
ဆော်ဒီ ကမ်းခြေမြို့ တွင် ရှီအာမွတ်စလင်မ်များ၏ စာအုပ်ဖတ် ပွဲတော် ကျင်းပ ၊ photos
January 15, 2018 - 5:39 PM
အဗ်နာ ။ ။ ဆော်ဒီ အာရေဗျ နိုင်ငံ၏ ကမ်းခြေမြို့ ဖြစ်သည့် ရှီအာ မွတ်စလင်မ် အများစု နေထိုင်သည့် ကာသီးဖ် မြို့ တွင် စာအုပ်ဖတ် ပွဲတော် ကို ကျင်းပနေသည့် မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရှီအာဆို နှိမ့်နင်းနေသည့် ဝဟာဘီ ဆော်ဒီ နိုင်ငံမှ ရှီအာ မွတ်စလင်မ် များ ၏ စာအုပ်ဖတ်ပွဲ တော် ကျင်းပနေခြင်း ကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် မြန်မာပြည်မှ ရှီအာမွတ်စလင်မ်များလည်း အတုယူသင့်ပါတယ်။
အီရတ် အမျိုးသားညွန့်ပေါင်းဥက္ကဋ္ဌ ဘဆွရာ မြို့ ရှဟီးဒ်များ၏ အကြီးအကဲများ နှင့်တွေ့ဆုံ ၊ photos
January 11, 2018 - 11:29 PM
အဗ်နာ ။ ။ အီရတ် အမျိုးသားညွန့်ပေါင်းဥက္ကဋ္ဌ ဟွဂ်ျဂျသွလ်အစ္စလာမ် ဆယက်ဒ် အမာ ဟကီးမ် အနေဖြစ် ဘဆွရာ မြို့ ရှဟီးဒ်များ၏ အကြီးအကဲများ မိသားစု ဝင်များ နှင့်တွေ့ဆုံပြီး အရေးကြီး စကားများ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ကဇ်ဝင်းန် မြို့ သူ ၊သား များ မှ မငြိမ်မသက်ဖြစ် အောင် ပြုခဲ့ သည့် သစ္စာဖောက် သူများ ကို ဆန္ဒပြ ရှုတ်ချ ၊ photos
January 8, 2018 - 11:57 PM
အဗ်နာ ။ အီရန်နိုင်ငံ ရှိ ကဇ်ဝင်းန် မြို့ သူ ၊သား များ မှ မငြိမ်မသက်ဖြစ်အောင် ပြုခဲ့ သည့် သစ္စာဖောက် သူများ ကို ဆန္ဒပြ ရှုတ်ချခဲ့ပါတယ်။ ဤဆန္ဒပြမှု သည် ဇန်နဝါရီ လ ၈ ရက်နေ့ က ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် ။
January 6, 2018 - 11:49 PM
ဟိုစိန် ဘယ်သူလဲ ? ဆိုသည့် အဖွဲအစည်း မှ လမ်းသွား ပြည်သူများ အား ဧည့်ခံ ၊ ကနေဒါ ၊ photos
အဗ်နာ ။ ။ ဟိုစိန် ဘယ်သူလဲ ? ဆိုသည့် အဖွဲအစည်း ၏ ကြိုးပမ်းမှုကြောင့် ကနေဒါ နိုင်ငံ၏ မြို့တော် အာ့သာဝါ မြို့ တွင် လမ်းသွားလမ်းလားပြည်သူများကို သောက်စရာ၊ရေးစရာဖြင့် ဧည့်ခံ ပြီး အေမာမ်ဟို စိန် (အ.စ) ဘယ်သူဆိုတာကို သိအောင် သဗ်လီးဂ်လုပ်နေသည့် အားကျဖွယ် ပုံရိပ်လေးများ ဖြစ်ပါတယ်။
အဗ်နာ ။ ။ နိုင်ဂျီးရီးယား ရှီအာများ ခေါင်းဆောင် အာယာသွလ္လာဟ် ရှိက်္ခဇက်ဇကီနှင့် ၎င်း၏ ဇနီးအား လွတ်ပေးရန် နိုင်ဂျီးရီးယား ရှီအာ ကျောင်
January 6, 2018 - 11:48 PM
ရှိက်္ခဇက်ဇကီနှင့် ဇနီးအား လွတ်ပေးရန် ရှီအာ ကျောင်းသူ၊သားများ ဆန္ဒပြ ၊ photos
January 4, 2018 - 12:04 AM
January 4, 2018 - 12:03 AM
ရဲဟ်ဗရ် အင်ကေလာဗ် ရှဟီးဒ်များ ၏ မိသားစု ဝင်များ နှင့်တွေ့ဆုံ ၊ photos
January 3, 2018 - 11:31 PM
အဗ်နာ ။ ။ ရဲဟ်ဗရ် အင်ကေလာဗ် ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီခါမေနာအီ အနေဖြင့် အီရန် ၊အီရတ် တိုက်ပွဲ တွင် အမိနိုင်ငံကို ကာကွယ်ရင်း ရှဟီးဒ် ဘွဲ့ခံယူသွား ကြာသူ များ ၏ မိသားစု ဝင်များ နှင့်တွေ့ဆုံစကားဆိုခဲ့ပါတယ် ။
ဟဇရသ် ဇိုင်နဗ် (စ.အ) ၏ရောင်ဇာကို ကာကွယ်ရင်း ရှဟီးဒ် ဖြစ်သွားသည့် မောင်လာနာများ ၏ မိသားစု ဝင်များကို ဂုဏ်ပြု ၊ photos
January 3, 2018 - 11:20 PM
အဗ်နာ ။ ။ ဟဇရသ် ဇိုင်နဗ် (စ.အ) ၏ရောင်ဇာကို ကာကွယ်ရင်း ရှဟီးဒ် ဖြစ်သွားသည့် မောင်လာနာ များ ၏ မိသားစုဝင် များကို ဂုဏ်ပြုသည့် အခမ်းအနားဖြစ်ပါတယ်။
အကြမ်းဖက် အသားထဲကလောက်ထွက် သစ္စာပေါက်များ ကို ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြ ၊ကွမ်း ၊ photos
December 31, 2017 - 7:19 PM
အဗ်နာ ။ ။ အဗ်နာ ။ ။ အီရန် နှင့်အစ္စလာမ် ရန်သူများ အမေရိကန် ၊အစ္စရေးတို့၏ ကြေးကျွန်များ ဖြစ်ကြသည့် အကြမ်းဖက် အသားထဲကလောက်ထွက် သစ္စာပေါက်များ သည် ၂၀၀၉ နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် အီရန် သမ္မတ သစ်ရွေးကောက်ပွဲကို အကြောင်းပြပြီး အကြမ်းဖက်မှုများပြုလုပ်၍ အီရန် တစ်နိုင်ငံ လုံးကို မငြိမ်မသက် ဖြစ်အောင် ၊ မအောင်မြင်သည့် ကြိုးစားမှုကို ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ ၎င်းတို့ကို အကြမ်းဖက်မှု ၇နှစ်ပြည့်သည့်နေ့ အဖြစ် ၎င်းတို့ကို မောင်လာနာ များ ၊ဇာကေရဟ်များ မှ အပြင်းအထန် ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြုမှု များပြုခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိ ဓာတ်ပုံများသည် ကွမ်းမြို့ ၏ ပုံရိပ်များ ဖြစ်ပါတယ် ။
အကြမ်းဖက် အသားထဲကလောက်ထွက် သစ္စာပေါက်များ ကို ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြ ၊အစ္စဖဟာန် ၊ photos
အဗ်နာ ။ ။ အီရန် နှင့်အစ္စလာမ် ရန်သူများ အမေရိကန် ၊အစ္စရေးတို့၏ ကြေးကျွန်များ ဖြစ်ကြသည့် အကြမ်းဖက် အသားထဲကလောက်ထွက် သစ္စာပေါက်များ သည် ၂၀၀၉ နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် အီရန် သမ္မတ သစ်ရွေးကောက်ပွဲကို အကြောင်းပြပြီး အကြမ်းဖက်မှုများပြုလုပ်၍ အီရန် တစ်နိုင်ငံ လုံးကို မငြိမ်မသက် ဖြစ်အောင် ၊ မအောင်မြင်သည့် ကြိုးစားမှုကို ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ ၎င်းတို့ကို ကြမ်းဖက်မှု ၇နှစ်ပြည့်သည့်နေ့ အဖြစ် ၎င်းတို့ကို အီရန်ပြည်သူလူထု မှ အပြင်းအထန် ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြုမှု များပြုခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိ ဓာတ်ပုံများသည် အစ္စဖဟာန်မြို့ ၏ ပုံရိပ်များ ဖြစ်ပါတယ် ။
December 31, 2017 - 7:18 PM
October 11, 2019 - 11:54 PM
ကျဲဟ်လွန်မ် ကရ်ဗလာ ဇေယာရသ် သွားသူများအား ကူညီရန် အစ္စဖဟန် မြို့ မှ ဘတ်စ်ကား အစီး ၈၀ စေလွတ် ။ ။photos
October 11, 2019 - 11:39 PM
ဆန်အန်တိုနီယိုကို ဖုံးလွှမ်းသွားတော့မယ့် ပုရစ်ကောင်များ
October 13, 2019 - 6:51 PM
ရသပြေံလိုဏျဂူအတှငျး ပတျဝနျးကငျြမထိခိုကျသညျ့ Cave Lighting LED မီးမြားတပျဆငျ
October 13, 2019 - 12:15 PM
ဆရာမမြားကို ဒသေခံမြားက ရညျးစားစကားပွောရနျ တိုကျတှနျးခဲ့မှု ပဲခူးတိုငျးဝနျကွီးခြုပျ ပွနျလညျတောငျးပနျ အစိုးရအနဖွေငျ့ ထိရောကျစှာအရေ
မွကှေကျ စညျးကမျးခကျြမြားကို လလေ့ာပွီးမှ လြှောကျလှာဝယျရနျ အစိုးရ တိုကျတှနျး
တပျမတျောသားကိုယျစားလှယျအခြို့၏ လူထုကှငျးဆငျးတှဆေုံ့မှု အငွငျးပှားဖှယျဖွဈနဟေု လှတျတျောအမတျအခြို့ပွော
October 12, 2019 - 8:49 PM
အပွညျပွညျဆိုငျရာ လူမှုကရုဏာလုပျငနျးဆုအတှကျ မွနျမာနိုငျငံ ကွကျခွနေီအသငျး ရှေးခယျြခံရ
October 12, 2019 - 8:33 PM
ရခိုငျပွညျနယျမွောကျပိုငျးတှငျ တပျမတျောက ဥပဒနှေငျ့အညီဆောငျရှကျခဲ့ဟု ဂပြနျဝနျကွီးခြုပျနှငျ့တှဆေုံ့စဉျ တပျခြုပျပွော
October 12, 2019 - 8:14 PM
October 12, 2019 - 7:58 PM
အမျိုးသမီးငယ်များ ၏ ကျဲဟ်လွန်မ် ဆိုင်ရာ ပြပွဲ ကျင်းပ ၊ မအ်စူမာ ယေကွမ်း (စ.အ) ။ ။photos
October 11, 2019 - 11:31 PM
(( ဆူကို ရူယူက်ခ်)) ဒေသတွင် ကျဲဟ်လွန်မ် အတွက် ခြေလျင် ဇေရယာသ် ပြုရန် သွားနေသူများ ၏ ပုံရိပ် အချို့ ။ ။photos
October 11, 2019 - 10:00 PM
စညျပငျဝနျထမျးမြားကို ကားပေးသညျ့ကိစ်စ မုဒိတာပှားကွရနျ ရနျကုနျမွို့တျောဝနျပွော
October 11, 2019 - 9:41 PM
October 11, 2019 - 9:24 PM
October 10, 2019 - 3:34 PM
October 9, 2019 - 4:35 PM
October 9, 2019 - 4:18 PM
October 9, 2019 - 3:55 PM
October 8, 2019 - 11:16 AM
October 8, 2019 - 11:04 AM
October 8, 2019 - 10:53 AM
ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးအပျေါ ဝဖေနျပွောဆိုမှုမြားကို စိတျမကောငျးဖွဈမိကွောငျး နပွေညျတျော ဒုမွို့တျောဝနျပွောကွား
October 8, 2019 - 10:34 AM
October 7, 2019 - 11:58 PM
အာယာသွလ္လာဟ် စါဖီ ရုံးတွင် ကျင်းပသည့် အေမာမ်ဟစန် (အ.စ) ရှဟာဒသ် မဂ်ျလစ် မြင်ကွင်း ။ ။ photos
October 7, 2019 - 11:53 PM
ကမ္ဘ္ဘ္ဘာ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအရှိဆုံး မွတ်စလင်ခေါင်းဆောင် ၅၀ စာရင်းတွင် အရှေ့တောင်အာရှမှ ၅ ဦး ပါဝင်
October 7, 2019 - 11:31 PM
October 7, 2019 - 5:31 PM
မှနျပွညျနယျလှတျတျောအပျေါ မခမြေငံဆကျဆံခဲ့သညျ့ လဝက ဝနျကွီးကို ဥက်ကဋ်ဌ သတိပေး
October 7, 2019 - 5:08 PM
October 7, 2019 - 4:51 PM
October 5, 2019 - 1:58 PM
October 5, 2019 - 1:41 PM
October 5, 2019 - 1:23 PM
October 3, 2019 - 9:21 AM
October 3, 2019 - 9:02 AM
October 3, 2019 - 8:46 AM
သူလျှိုလုပ်နေသည့် နိုင်ငံသား တရုတ်ဧည့်လမ်းညွှန်ကို အမေရိကန် ဖမ်းဆီးတရားစွဲ
October 2, 2019 - 11:43 PM
တောင်အာဖရိကမှ ဗလီတစ်လုံး နိုင်ငံ၏ သမိုင်းအမွေအနှစ်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံရ
October 2, 2019 - 11:35 PM
( ၅ ) ကြိမ် မြောက် ကျဲဟ်လွန်မ် ဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့ ဖလား ဆု ပေးပွဲ ပိတ်ပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပ ။ ။ photos
October 1, 2019 - 11:53 PM
Who is husein (a.s) အဖွဲ့အစည်းမှ လိုအပ်သူများ ကို လှူဒါန်း / Dearborn ။ ။ photos
October 1, 2019 - 11:47 PM
ဟူစီယီမင်နီများ မှ အကျည်းသား ရာကျော် အား လွတ်ပေး ။ ။ photos
October 1, 2019 - 11:39 PM
မဂ်ျလစ်စေ ဟိုစိန် (အ.စ) ကျင်းပ / ဂျာမဏီ ။ ။ photos
October 1, 2019 - 11:26 PM
Who is husein (a.s) အဖွဲ့အစည်းမှ သောက်ရေဗူးများ လှူဒါန်း / နယူးယောက် ။ ။ photos
September 30, 2019 - 10:56 PM
အာယာသွလ္လာဟ် အါမိုလီ ၏ စာရိတ္တဆိုင်ရာ ဟောပြောပွဲ မြင်ကွင်း ။ ။ photos
September 30, 2019 - 10:48 PM
အမိမြေကိုကာကွယ်ခြင်း ရက်သတ္တပတ်ဆိုင်ရာ ပြပွဲ ကျင်းပ / မစ်ဂျစ်ဒ် ဂျန်မ်ကရမ် ။ ။ photo
September 30, 2019 - 10:37 PM
ကရ်ှမီးပြည်သူများ ဘက်မှ ဆန္ဒပြ သပိတ်မှောက် / နယူးယောက် ။ ။ photos
September 30, 2019 - 10:22 PM
Who is husein (a.s) အဖွဲ့အစည်းမှ ဆီးရီးယား ဒုက္ခသည်များကို ထမင်းဗူး လှူဒါန်း ။ ။ photos
September 28, 2019 - 6:05 PM
ပါလက်စတိုင်း ပြည်သူများ ၇၆ ကြိမ်မြောက် သပိတ်မှောက် ဆန္ဒပြ ။ ။ photos
September 28, 2019 - 5:59 PM
အီရန် လေတပ်မတော် ပါဝင်သည့် နမာဇ်စေ ဂျွန်မာ မြင်ကွင်း / အစ္စဖဟန် ။ ။ photos
September 28, 2019 - 4:49 PM
September 28, 2019 - 4:34 PM
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တစ်ဦးသာ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသစ် ပြောင်းလဲနိုင်မည်ဟု ဦးဉာဏ်ဝင်းပြော ခြေဥပြင်ဆင်ရေး အောင်မြင်သည်အထိဆောင်ရွက်မည်ဟ
September 28, 2019 - 4:19 PM
September 25, 2019 - 6:57 AM
September 25, 2019 - 6:47 AM